Wasiirka arrimaha gudaha oo ka hor yimid heshiiskii Koonfur Galbeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka arrimaha gudaha oo ka hor yimid heshiiskii Koonfur Galbeed
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre ayaa ka horyimid heshiis shalay looga dhawaaqay Muqdisho, kaasoo lagu shaaciyey iney hal maamul wada dhisanayaan kooxihii Baydhabo ku dhisay labo maamul oo iska soo horjeeda oo kala ahaa: Maamulka Lixda gobol iyo maamulka saddexda gobo lee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Heshiiska ay gaareen labada kooxood ee is barbar-yaaca ka weday Baay waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud, Raysulwasaare C/weli, gudoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari iyo wakiillo badan oo ka socday beesha caalamka.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre oo la hadlay BBC ayaa sheegay in heshiiskaasi ahaa mid sharci darro ah oo lala hareer maray qorshaha wasaaradiisa.
Wasiir Goodax ayaa tilmaamay in goobaha hadda loo dhisayo maamullada ay qaarkood weli Alshabaab maamulaan.
‘’Meelaha maamulada loo sameenayo maahan goobo intooda badan xur ah, kuwii horey loo sameeyay ayaa wali buuq ka jiraa oo farqaha la is heestaa, khilaaf badan ayaa ka taagan mamualadii mudadii hore loo sameeyay kana waa lamid” ayuu yiri Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre.
Goodax ayaa sheegay in shaqadiisa fara galin lagu hayo ayna dad kale faraha lasoo galeyn shaqadiisa, waxaa uuna tilmaamay in shaqada dowlada ay iska noqotay nin walboo iskaa wax u qabso.
Waa wasiirkii ugu horreeyey ee dhawaanahan si cad uga horyimaadda go’aan ay wax ka ogyihiin madaxda ugu sarreysa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Cadale: Dad ku sumoobay shaah ay cabeen
Shirk u saabsan Higsiga Cusub ee Soomaaliya oo ka dhacay Muqdisho